Ụgbọ elu ọhụrụ si Bangkok gaa Phnom Penh na Bangkok Airways
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Transportation » Ụgbọ elu ọhụrụ si Bangkok gaa Phnom Penh na Bangkok Airways
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kambodia • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị ọbịa a ma ama nke Cambodia nabatara ụgbọ elu PG 931 nke ọma gụnyere HE Sao ​​Wathana, onye isi ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Phnom Penh (Odeakwụkwọ steeti) na onye ndụmọdụ nke HE Dr Minister (5)th site n'aka nri) na Maazị Mayoon Udom, Onye njikwa ọdụ ọdụ nke Bangkok Airways Public Company Limited (4th site n'aka ekpe).
Ọrụ ndị maliteghachiri n'etiti Bangkok (Suvarnabhumi) na Phnom Penh (Cambodia) bụ ụgbọ elu Airbus A320 na-arụ ọrụ, na-amalite site na ụgbọ elu anọ kwa izu (Monday, Wenezde, Fraịde na Sọnde) a ga-abawanye na ụgbọ elu kwa ụbọchị site na 16 Disemba 2021. - 26 Maachị 2022. Ụgbọ elu PG931 na-apụ apụ na Bangkok (ọdụ ụgbọ elu Suvarnabhumi International) na 08.50hrs. wee rute n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Phnom Penh na elekere 10.05. Ụgbọ elu mbata PG932 na-ahapụ ọdụ ụgbọ elu Phnom Penh International na elekere 10.55. wee rute na Bangkok (ọdụ ụgbọ elu Suvarnabhumi International) na elekere 12.10.
Ụgbọ elu Bangkok na-agbasochi usoro ịkpachara anya megide COVID-19, gụnyere ịsachapụ na ihicha akụkụ ndị dị mkpa dị ka ọnụ ọgụgụ nbanye na ebe ezumike. Atụmatụ mgbochi na mgbochi nke ụgbọ elu na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ nke Ngalaba Nchịkwa Ọrịa, Ministry of Health Public, na Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).